धोरेमा अनैतिक सम्बन्धका कारण कुटपिट हुदाँ एक जनाको मृत्यु :: कृष्णा प्र. कुशवाहा :: धोरेमा अनैतिक सम्बन्धका कारण कुटपिट हुदाँ एक जनाको मृत्यु
धोरेमा अनैतिक सम्बन्धका कारण कुटपिट हुदाँ एक जनाको मृत्यु
शुक्रबार, असार ३, २०७९ कृष्णा प्र. कुशवाहा
पकाहाँमैनपुर । कुटपिटबाट धोरेमा एक जनाको ज्यान गएको छ । पकाहाँमैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ धोरे बस्ने अन्दाजी बर्ष ६५ को दशई महारा चमारको ज्यान गएको हो ।
पकाहाँमैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ धोरे बस्ने बर्ष ६५ को महेश महारा चमार , उनका बर्ष ५२ की श्रीमती रम्भा देवी , छोरी बर्ष २५ की मिना देवी , बर्ष १८ की बबिता कुमारी र छिपहरमाई गाउँपालिका वडा नम्बर २ बस्ने अन्दाजी बर्ष ३२ को ज्वाई अर्जुन रामको कुटाईबाट ज्यान गएको प्रहरी चौकी धोरेले जनाएको छ ।
मृतक र अभियुक्त बिच गत जेठ २९ गते राती अनैतिक सम्बन्ध लाई लिएर दूई घर बिच वादविवाद भएको थियो । सोही वादविवादलाई लिएर फेरी राती वादविवाद हुदाँ सोही क्रममा महेश महारा चमारको पक्षले कुटपिट गर्दा दशई महारा चमारको मृत्यु भएको हो ।
कुटपिट गर्ने ब्यक्ति मध्ये ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिईएको र २ जना फरार रहेको प्रहरी चौकी धोरेले जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिईएका रम्भा देवी , मिना देवी , अर्जुन रामलाई थप अनुसन्धानका लागी ईलाका प्रहरी कर्यालय पोखरीया पठाइएको र फरार रहेका महेश महारा चमार र बबिता कुमारीको खोजी भईरहेको प्रहरी चौकी धोरेले जनाएको छ ।
घटना बारे जानकारी पाए लगत्तै प्रहरी चौकी धोरेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३, २०७९ १०:०३